Abaalmarinta Caddaaladda - Sheekooyinka Guusha - Khadaffy Janjalani
Khadaffy Janjalani wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii ugu sarreeyay ee Kooxda Abu Sayyaf, oo ah koox Islaamka xag-jirka ah oo ka hawlgala dalka Filibiin. Janjalani wuxuu mas’uul ka ahaa afduubkii iyo dilalkii loo geysan jiray dadkii Filibiinka iyo Mareykanka ahaa. Wuxuu ku lug lahaa afduubyadii Martin iyo Gracia Burnham iyo laba qof oo kale oo Mareykan ah iyo wuxuu si toos ah mas’uul uga ahaa madaxii laga gooyay Guillermo Sobero, oo ahaa qof kale oo Mareykan ah. Janjalani wuxuu kaloo ku lug laha qorsheyaal iyo hawlgallo badan oo loogu talagalay Mareykanka. Gaar ahaan, wuxuu ku lug lahaa weerarradii lagu qaaday Safaaradda Mareykanka ee Manila iyo iyo Superferry 14 iyo bamyadiii qala qarxiyay Maalintii Valentine, kuwaasoo ay guud ahaan ay ku geeriyoodeen boqolaal qof oo aan wax geysan.
Bishii Sebtembar 2006-dii warbixin laga helay dhowr qof oo reer Filibiin ah ayeey adeegsadeen Ciidanka Xoogga ee dalka Filibiin (AFP) si ay u weeraraan una dilaan Khadaffy Janjalani. Bilihii xigay, warar sheegaya geerida janjalani ayaa soo shaac baxay balse lama xaqiijin maadaama aysan saraakiisha dawladda arag jirkiisi. Dabayaaqadii Janaayo 2007, laba qof ayaa keenay warbixin ku saabsan halka uu ku sugan yahay jirka Janjalani iyadoo kaddibna baaritaan ay FBI-da sameysay, lagu xaqiijiyay in Janjalani uu dhab ahaantii, geeriyooday. Dhammaan warbixinadii ay soo gudbiyeen shakhsiyaadkan waxay muujiyeen kuwo ahaa muhiim si loo dilo iyo si loo aqoonsado Janjalani. Sidii geesinimada lahayd ee ay taageero uga geysteen darteed, waxaa dadkii reer Filibiin ahaa la siiyay abaalmarin guud oo gaaraysa $5 milyan (245 milyan oo beesos) oo ay Dawladda Mareykanka ku siisay xaflad uu Safiirka Mareykanka ee dalka Filibiin u fadhiya uu ku qaban qaabiyay jasiiradda Jolo 7-dii Juun, 2007.
Waxaa horrantii 1990-dii Kooxda Abu Sayyaf aasaasay Abdurajik Janjalani, oo ah walaalkii ka weynaa Khadaffy Janjalani. Abdurajik Janjalani ayaa Afqaanistaan kula kulmay Usama bin Ladin oo iminka dhintay marki uu la dagaallamayey Soofiyeetka waxaana ku dhalatay in uu dalka Filibiin ka aasaaso dhaqdhaqaaq goosad oo Islaam ah. Tan iyo 1990-yadii, ASG waxay dhowr weerar oo qaraxyo bam ah ay ku qaadeen hanti ay leeyihiin Mareykanka iyo Filibiin. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxay kaloo ASG ka dambeeyeen dhowr hawlgal oo dad lagu afduubay si ay lacag u helaan, waxayna bartilmaameed ka dhigteen ganacsatada deegaanka iyo dad dalxiis ku jira. Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka waxay ASG ku tilmaantay in ay yihiin urur argagixiso oo ajnabi ah oo weli khatar ku ah xasilloonida dalka Filibiin.